Ken Follett | Suugaanta hadda jirta
Ken Follett waa mid ka mid ah qorayaasha ugu caansan adduunka. Wuxuu caan ku noqday adduunka oo dhan buuggiisa "Tiirarka Dhulka", laakiin dhab ahaantii wuxuu horey u haystay buugaag kale oo badan oo guntigiisa ka hooseeya akhristayaashana "cabbay" buugaagtiisu way badnaayeen.
Haddii aadan maqlin qoraaga oo aad rabto inaad waxbadan ka ogaato, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sidaa ku sameyso hoosta maxaa yeelay waxaan ururinay wax walba oo ay tahay inaad ka ogaato nolosha qoraahan.
1 Waa kuma Ken Follett
1.1 Shaqooyinkii hore ee Ken Follett
1.2 Jasiiradda duufaanka
2 'Kale' Ken Follett
3 Buugagta Ken Follet
Waa kuma Ken Follett
Waxaan dhihi karnaa Ken Follett waa mid ka mid ah qorayaasha ugu caansan uguna iibka badan adduunka, waa la amaanay oo markasta oo uu buug soo saaro waxaa jira dad badan oo u taga buugaagta buugaagta isaga loogu talagalay. Laakiin waxaan dooneynaa inaan kala fur furno qoraaga, si aan wax yar uga ogaano noloshiisa gaarka ah.
Si tan loo sameeyo, waa inaan bilownaa Juun 1949. Si sax ah 5-tii waxay ahayd markuu yimid Cardiff, qoys aad u diin badan. Follett wuxuu ahaa curadka saddex walaalo ah iyo wuxuu ku noolaa caruurnimadiisii ​​waalidkiis ay calaamadeeyeen, Martin iyo Veenie Follett. Si aan fikrad kaa siiyo, waxaa laga mamnuucay inay dhageystaan ​​raadiyaha, daawadaan telefishanka ama tagaan filimaanta.
Marka Ken Follett dariiqa kaliya ee naftiisa lagu madadaaliyo wuxuu ahaa sheekooyin. Kuwaas waxaa ka sheekeeyay hooyadiis oo mala-awaal iyo mala-awaal uu yaraantiisii ​​qabay inta kale. Sidaa darteed, iyada oo aan waxba la qaban, wuxuu bartay akhriska goor hore iyo buugaagtu waxay u adeegeen sidii ay uga baxsan lahaayeen noloshiisa caajiska ah. Sababtaas awgeed, wuxuu lahaa meesha uu ugu jecel yahay maktabadda magaaladiisa.
Markuu 10 jirsaday, qoyska Follett wuxuu u guuray London oo uu waxbarashadiisii ​​ka sii watay. Wuxuu iska diiwaan galiyay falsafada kuliyada jaamacada, wax dad badan ka yaabiyay tan iyo, isagoo ah wiilka kormeeraha canshuuraha, waxaa loo maleynayay inuu raaci doono raadkii aabihiis. Laakiin dariiqa uu ku soo barbaaray awgood, maadaama qoyskiisa ay aad u diin badnaayeen, waxaa ka buuxay shaki, xirfaddaasina waxay ahayd hab uu jawaabo ugu raadsado wixii maskaxdiisa ku jiray. Xaqiiqdii, qoraaga laftiisu wuxuu tixgelinayaa in doorashadan ay saameyn ku yeelatay qoraa ahaan.
Markuu jiray 18, wuxuu la kulmay xaalad yaab leh oo ku saabsan da'diisa. Waana taas, intii uu wax baranayay oo uu wakhti fiican ku qaadanayay Jaamacadda, saaxiibtiis, Mary, ayaa uur yeelatay oo lammaanuhu waxay ku dhammaadeen guur ka dib xilli-waxbarasheedkii ugu horreeyay. Wuxuu sii watay shaqadiisa, isagoo noqday qof jecel siyaasada, wuxuuna dhamaaday bishii Sebtember 1970.
Shaqooyinkii hore ee Ken Follett
Qalin jabiyay dhawaan, Follett waxay go'aansatay inay sameyso shahaado sare ee saxaafadda, wax bilaabay inuu ku helo "cayayaanka" qoraal ahaan. Xaqiiqdii, wuxuu bilaabay inuu u shaqeeyo weriye ahaan Cardiff, South Wales Echo.
Markii gabadhooda, Marie-Claire, dhashay saddex sano kadib, waxay noqotay qoraa wargeysyada London Evening News.
In kasta oo ay xaqiiqda tahay inuu shaqo helayo, haddana wuxuu xaqiiqsaday in riyadiisa ah inuu noqdo wariye cilmibaare guuleysta uusan waligiis imaan doonin, sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu beddelo dhabbadiisa oo wuxuu bilaabay inuu qoro sheekooyin xilliyada uu firaaqada yahay, habeen iyo habeenba. dhamaadka todobaadka.
Taasi waxay sameysay, sanad kadib, 1974, wuxuu go'aansaday inuu ka tago shaqadiisa wargayska oo uu ku biiro Everest Books, oo ah madbacad London ah halkaas oo uu ka bilaabay inuu ku daabaco buugaagtiisa, inkasta oo midkoodna uusan guuleysan. Ilaa ay ka gaadhay. "Jasiiradda Duufaannada" waxay ahayd buuggii ku kiciyey Ken Follett kooxdii ugu iibsiga fiicnayd.
Buuggan, oo la daabacay 1978, wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Edgar wuxuuna iibiyey in ka badan 10 milyan oo nuqul ilaa maanta. Natiija ahaan, Ken Follett wuxuu iska casilay shaqadiisii ​​wuxuuna kireystay guri ku yaal koonfurta Faransiiska si uu gabi ahaanba isugu geeyo buugaagtiisa xigta. Dabcan, iyada oo laga baqayo in uusan soo celin karin wixii uu ku gaadhay guushaas weyn.
Muddo saddex sano ah ayey ku qaadatay Ken Follett inuu mar labaad boorsooyinkiisa xir xirto oo uu u dhaqaaqo, mar labaad, London, gaar ahaan Surrey. Waana in shineemo, tiyaatar iyo noocyo kale oo madadaalo ah ay dib ugu soo celiyeen magaalada. Waqtigaas, Follett aad iyo aad ayey u xiiseeysay siyaasadda. Wuxuu ku lug lahaa ololihii doorashada ee Xisbiga Shaqaalaha, halkaasoo uu kula kulmay Barbara Broer, xoghayaha laanta deegaanka ee xisbiga. Wuu jeclaaday wuuna guursaday 1984. Waxay ku nool yihiin fagaaraha Hertfordshire, halkaas oo carruurta Ken Follett, carruurta Barbara, iyo sidoo kale lamaanayaasha lammaanaha iyo carruurta ay sii dhaleen, sidoo kale.
Shaqadeeda, Barbara waxay ahayd xildhibaan Stevenage ilaa iyo 1997 halka Ken Follett uu sii wado qorista; weliba, weligiis uma oggolaan inay siyaasaddu gasho suugaanta.
Tilmaamaha qoraalkiisa ayaa ah inuu bilaabo qorista quraacda ka dib oo uu sii socdo ilaa afarta galabnimo, waqtigaas oo uu istaago si uu u nasto una nasto.
'Kale' Ken Follett
Caadi ahaan Ken Follett waan ognahay dhiniciisa suugaanta laakiin, Ma ogtahay inuu sidoo kale madaxweyne ka yahay ururo kale? Hagaag haa, gaar ahaan, waxaa la ogyahay inay tahay:
Madaxweynaha Dyslexia Action.
Xubin ka mid ah Guddiga Maamulka ee Hay'adda Qaranka Akhriska iyo Qoraalka.
Xubin ka tirsan golaha dugsiga ee Roebuck Primary School and Nursery.
Shahaado sharaf Shahaadada Suugaanta, oo ka timid Jaamacadda Glamorgan.
Xubin ka tirsan Royal Royal of Arts.
Madaxweynaha Sharafta leh ee Beesha Stevenage Trust.
Iyo, in kasta oo xaqiiqda ay tahay inuu waqtigiisu u gaar yahay buugaagta, haddana qoraagu wuu ogyahay sida loo abaabulo naftiisa si uu u fuliyo ballamo badan oo kale, iyo inuu ka caawiyo halka looga baahan yahay. Marka lagu daro inuu aad ugu lug lahaa qoyskiisa.
Buugagta Ken Follet
Halkan waxaan kaaga tagi a Liiska dhammaan buugaagta uu daabacay Ken Follett, Mararka qaarkood lagu saxeexo magacyo been abuur ah oo kala duwan.
Tufaaxa Tufaaxa taxanaha ah (1974-1975), oo lagu saxeexay magac been abuur ah Simon Myles
iyo Big Hit
Taxane basaas Piers Roper (1975-1976), oo magaciisa lagu saxeexay
Shaqooyin kale oo lagu saxiixay magacyo been abuur ah oo kala duwan (1976-1978)
Buugaagta carruurta yaryar, oo ku hoos qoran magaca shakhsiyadeed ee Martin Martinsen
Sirta Daraasadaha Kellerman ama Sirta Daraasaadka Kellerman
Mataanaha xoogga badan ama qarsoodiga meeraha dixiriga
Wuxuu ku shaqeeyaa magac been abuur ah Bernard L. Ross
Amok: Boqorka Legend
Mid ka mid ah Capricorn
Buug-gacmeedyo ku hoos qoran magaca Zachary Stone
Lacagta waraaqda ah.
Novels oo magacaaga lagu saxeexay ilaa 1978
Furaha ayaa ku yaal Rebecca.
Ninka reer St. Petersburg.
Habeenkii biyaha dushooda.
Nasiib khatar ah.
Meel la yiraahdo xorriyad.
Ciyaar labalaab ah.
Duulimaadkii ugu dambeeyay.
Tiirarka Dhulka Saga
Adduun aan dhammaanayn.
Mugdiga iyo waaga.
Dhicitaankii kooxda weyn.
The Heist of the Century, 1978, oo uu weheliyo René Louis Maurice; (oo cinwaan looga dhigay Mareykanka The Gentleman of 16 July).
Notre-Dame, 2019, buug maamuus ah cathedral of Notre Dame de Paris dabkeedii ka dib.
Hadda oo aad wax yar ka sii ogaatay Ken Follett, ma ku dhiirraysaa inaad aqriso buugaag badan oo buuggiisa ah? Midkee ayaad ugu jeceshahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » Ken Follett
Waxaas oo dhan waan ku siin doonaa
Vicente Nuñez. Sannad-guurada dhimashadiisa. Gabayo